Nnukwu mmeri maka nnwere onwe ikwu okwu na ndị nta akụkọ na Latin America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nnukwu mmeri maka nnwere onwe ikwu okwu na ndị nta akụkọ na Latin America
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na mmeri dị ukwuu maka nnwere onwe nke akwụkwọ akụkọ na nnwere onwe ikpe, ndị Kọmitii Amerịka na-ahụ maka ikike mmadụ (IACHR) emeela mkpebi gbara ọkpụrụkpụ megide Ecuador, na-ekwu na mba ahụ agbachitere akwụkwọ akụkọ ikpe na-akwadoghị megide akwụkwọ akụkọ El Universo, ndị nwe ya, na onye na-ede akwụkwọ echiche bụ onye derela akụkọ banyere President Rafael Correa na 2011. Na February 19, Courtlọikpe Inter-American nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ kwetara ịnụrụ okwu ahụ.
Mkpebi nke IACHR, otu kwụụrụ onwe ya nke Organizationtù Amerịka (OAS), kpebiri na oge opupu ihe ubi afọ gara aga mana emebeghị ka ọha na eze mara, na-echere nyocha ikpeazụ nke gọọmentị Ecuador. Kọmịshọn ahụ chọpụtara na Ekwedọọ mebiri nkwa nke nnwere onwe ikwu okwu yana usoro kwesiri ekwesi n'okpuru Nkwekọrịta Amụma Amerịka na Ihe Ndị Ruuru Mmadụ, nke Ecuador sonyeere na 1977.
Eluigwe na ala kpughere mkpebi IACHR na akụkọ akụkọ February 21. N'ime ya, akwụkwọ akụkọ ahụ kwuru na ọ "nọrọ n'okwu ikpe nke metụtara mmegbu, enweghị ele mmadụ anya n'ihu na iwu na-akwadoghị," na-agbakwụnye na ọ na-atụ anya na mkpebi ikpeazụ nke ikpe ahụ na Courtlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na United States "ga-atụnye ụtụ… n'ịme ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nọọrọ onwe ya ma na Ecuador ma na ndị ọzọ Latin America. "
Enwere m olileanya na ị ga-ede banyere mkpebi ikpe a, nke siri ike ịlụ ọgụ na ogologo oge. Ọ bụ nnukwu mmeri maka nnwere onwe nke akwụkwọ akụkọ yana ikike zuru ụwa ọnụ ikwu okwu na Ecuador na gafee America. Mkpebi ahụ bụkwa ịba mba dị ịtụnanya nke iwu mmebi iwu nke Ecuador ma setịpụ ụkpụrụ doro anya na ndị otu OAS kwesịrị ịkwụsị iwu ndị a n'ihi na a na-ejikarị ha egwu na mkpagbu ndị nta akụkọ na ịmanye onwe ha. Mkpebi IACHR na-ekwupụtakwa mkpa ọ dị maka iwu nke iwu, ikewapụ ikike na ngalaba ikpe kwụụrụ onwe ya iji kpuchido ikike mmadụ na ọchịchị onye kwuo uche ya.
"Steeti nwere usoro ndị ọzọ na ụzọ ndị ọzọ maka nchedo nzuzo na aha [nke ndị ọrụ ọha na eze] nke na-anaghị egbochi mmegide nke ntaramahụhụ mpụ, dị ka ọrụ obodo, ma ọ bụ nkwa nke ndozi ma ọ bụ nzaghachi," ka IACHR dere na mkpebi ya .
Mkpebi IACHR bịara na ikpe 2011 nke Eluigwe na ala, ndị nwe ya - ụmụnne Carlos, César, na Nicolás Pérez - na onye na-ede akwụkwọ akụkọ Emilio Palacio bụ ndị Correa, Onye isi ala Ecuador gbara site na 2007 ruo 2017, maka ebubo na ha mejọrọ ya. Ebubo ahụ sitere na kọlụm February 2011 na Eluigwe na ala nke Palacio dere, “No To Lies,” nke kpọrọ Correa “onye ọchịchị aka ike” ma jụọ ajụjụ maka etu o si mee ọgba aghara ndị uwe ojii mere ya na ndị ọchịchị ya, n’oge ndị agha wakporo ụlọ ọgwụ.
Na July 2011, onye ọka ikpe ụlọ ikpe ndị omekome kpebiri Correa ma maa Palacio na ụmụnne Perez mkpọrọ afọ atọ onye ọ bụla ma nye ha iwu na El Universo si nne na nna na-akwụ ụgwọ ngụkọta $ 40 na mma-ego nke ndị nkatọ kwuru na ọ dị oke njọ na mmerụ ahụ (ma ọ bụrụ na ọ bụla) tara ahụhụ site na Correa ma bụrụ nke edoziri iji mebie akwụkwọ akụkọ ahụ. Nnyocha nyocha nke oge gara aga na kọmpụta kọmpụta nke onye ọka ikpe na ikpe ahụ chọpụtara na ọ bụ onye ọka iwu nke Correa dere ya na mkpebi ya, nkwenye pụrụ iche nke Ecuador na-ekwu na ngalaba ikpe onwe ya.
Mgbe ha nwụsịrị akwụkwọ mkpegharị ikpe mbụ ha, akwụkwọ akụkọ ahụ, ndị nwe ya na Palacio gbara akwụkwọ na IACHR na October 2011. Na February 15, 2012, highestlọikpe Kasị Elu nke Ecuador, oflọikpe Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi na Mba, kwadoro mkpebi ụlọikpe nke ala, tinyere ikpe ụlọ mkpọrọ na ezi Tbọchị iri na abụọ ka e mesịrị, na-esote ikpe ụwa dum nke mkpebi ahụ, Correa “gbaghaara” ndị na-agbachitere ya.
Na-echegbu onwe ya na mkpebi ahụ ka dị ka iwu na iwu Ecuadorean, na ụjọ nke Correa na-akpagbu ndị nta akụkọ na oge niile nke onye isi ala ya, Eluigwe na alaNdị nwe ha na Palacio gara n'ihu na ikpe IACHR.
Mkpebi ikpe ahụ bụ nke ekpughere site na Eluigwe na ala na February 21. N’etiti ọgwụgwọ ndị ọzọ, ọ na-atụ aro ka Ecuador mebie iwu nkwutọ ya, kagbuo mkpebi ikpe Courtlọikpe Ikpe Mba nke February 15, 2012, ma kwụghachi ma rịọ mgbaghara n’ihu ọha na ndị gbara akwụkwọ maka mkpagbu na mmekpa ahụ.
N’ịgbaso mkpebi nke IACHR, ụmụnna Perez na Palacio kwuru na ha ga-ewepụ okwu a n’ Courtlọikpe Inter-American nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ, nke n’izu gara aga nyere mkpebi ịnakwere ịnụrụ ikpe ahụ. Nicolás Pérez kwuru, "Anyị chọrọ mkpebi ikpe, maka na ikpe ụlọ ikpe ga-eweghachi ikike anyị zuru oke ma setịpụ ụkpụrụ dị mkpa maka ikike ndị nta akụkọ."